အိမ်ဖော်နဲ့ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ယောင်္ကျားကို ပညာပေးလိုက်တဲ့ ကျောင်းဆရာမ မိန်းမ ဖြစ်သူက ကျောင်းဆရာမ ဖြစ်တော့ တာဝန်ကျရာ နယ်မြေဒေသမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ် …။ အိမ်မှာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ပဲ ကျန်ခဲ့တယ် …။ သားသမီးက မရှိ စားဖို့ သောက်ဖို့ ချက်ပြုတ်ဖို့က ပြသနာ မကြီးလှပေမယ့် အဝတ်လျှော် နဲ့ […]
February 23, 2020 CeleLove 0
မင်္ဂလာဦးညမှာပဲ သတိပါလစ်သွားခဲ့ရတဲ့ သတို့သမီးရဲ့ အဖြစ် မင်္ဂလာဦးညမှာပဲ သတိပါလစ်သွားခဲ့ရတဲ့ သတို့သမီးရဲ့ အဖြစ်လေးပါ …. ။ ” မင်္ဂလာဦး ည ရင်ခုန်သံ ” ” အားးးးးးး!!!” ​အော်​သံကြား​ပေမယ့် ဒါသဘာဝပဲ​လေဆိုပြီး အိမ်​သားများ မသိချင်​​ယောင်​​ ဆောင်​​နေလိုက်​သည်​​ … … ။ […]
အမေ နဲ့ သမီး လွဲပြီး ဆက်ဆံလိုက်မိတဲ့ ယောက်ျား ရဲ့အဖြစ်
January 13, 2020 Cele Love 0
အမေ နဲ့ သမီး လွဲပြီး ဆက်ဆံလိုက်မိတဲ့ ယောက်ျား ရဲ့အဖြစ် ညဆိုင်း အလုပ်ဆင်းပြီး ပြန်လာတဲ့ယောက်ျားဟာ အိမ်ပြန်ရောက်လို့ အိပ်ခန်းထဲဝင်လာတော့ မိန်းမလုပ်သူက စောင်ကြီးခေါင်းမြီးခြုံပြီး အိပ်နေတုန်းပဲ ရှိသေးတယ် …။ ဒါနဲ့ ဘာမှပြောမနေဘူး စောင်ခြုံထဲ အသာ တိုးဝင်လိုက်တယ် …။ ပြီးတော့ မိန်းမကို […]
အပျိုဖော်ဝင်ခါစ ၁၆ နှစ်သမီးလေး အခန်းထဲကို အဖေတစ်ယောက် ဝင်ကြည့်တဲ့အခါ…
December 16, 2019 Cele Love 0
အပျိုဖော်ဝင်ခါစ ၁၆ နှစ်သမီးလေး အခန်းထဲကို အဖေတစ်ယောက် ဝင်ကြည့်တဲ့အခါ… သမီးမရှိပဲ အခန်းက သပ်ရပ်နေပြီး စားပွဲပေါ်မှာ စာတစ်​​စောင်​ တင်ထားတာကို တွေ့ လိုက်ပါတယ် ။စာကို ဖတ်ကြည့်တဲ့ အခါ …… ” ချစ်သော ဖေဖေ ဒီစာကို ရေးရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး …။ […]
ဒီခေတ် စုန်းက အရင်ခေတ်ထက်ဆိုးတယ် တစ်ကိုယ်လုံးကို စုပ်တော့တာ
ဒီခေတ် စုန်းက အရင်ခေတ်ထက်ဆိုးတယ် တစ်ကိုယ်လုံးကို စုပ်တော့တာ စုန်းစုပ်ခြင်း ======= ” သမီး ၊ ဒီကိုလာစမ်း ။ လည်ပင်းက အညိုကွက်က ဘာဖြစ်တာလဲ ” မိခင်မေးလိုက်သည့် စကားကြာင့် မသန္တာစိုး အထိတ်တလန့် ဖြစ်သွားရသည် ။ အသေအချာ ဖုံးကွယ် ထားပါလျက်နှင့် […]
လက်တို့ပြီးတော့မှ ပြောချင်သူ တွေ သတိထား “တို့ဆေး”
December 6, 2019 Cele Love 0
လက်တို့ပြီးတော့မှ ပြောချင်သူ တွေ သတိထား “တို့ဆေး” ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ…” အစ်မ..အစ်မ..” အမျိုးသမီးက လှည့်ကြည့်ပြီး …. ” အမလေးး….” ” ဟင်…ဘာလဲ? ” ” အမလေး..ကယ်ကြပါအုံး..သူ…သူ…ကျမကို တို့လိုက်ပြီ ” ” ဟာ…” ” သောက်ပြသနာတော့ တက်ပြီဟ” ” […]
ဟိုတယ် အခန်းနံပါတ် (၃၉) ….
November 28, 2019 Cele Love 0
ဟိုတယ် အခန်းနံပါတ် (၃၉) …. စိတ်မရှည်သူမဖတ်ရ။ သဘောထားကြီးသူအတွက်သာ အခန်းနံပါတ် ၃၉…. အရပ်မြင့်မြင့် အသားဖြူဖြူ လူရည်သန့် လူငယ်တျောက် ဟိုတယ်ထဲကိုဝင်လာတယ်။ ကောင်တာရှေ့ရောက် ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် သူဌေးကိုမေးတယ်။ man – အခန်းနံပါတ် ၃၉ အားလား boss – အားပါတယ်ဗျ man […]
ဦး ဆိုတဲ့ ခေါ်သံကြားရင် အခုထိ ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်း ထတုန်းဆိုတဲ့ ဦးလေးကြီး ..
November 25, 2019 Cele Love 0
ဦး ဆိုတဲ့ ခေါ်သံကြားရင် အခုထိ ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်း ထတုန်းဆိုတဲ့ ဦးလေးကြီး .. ဦးဆိုရင်ကြောက်နေရသည် …. ဖုန်းဝင်လာလို့ ကောက်ကိုင်လိုက်တာ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ မနေ့ကမှ ချစ်သူဖြစ်သွားတဲ့ ခေးလေးရဲ့ ဖုန်းဖြစ်နေတော့ ကျုပ် ပျော်သွားတယ်။ “ဦး” “ပြော ခလိန်း” “ဦး ပျော်လို့ရပြီ သိလား” […]
ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့မို့ မလုပ်ပါနဲ့လို့ တားမရ၍ မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ရပ်ကွက်ရုံး တိုင်ကြားခဲ့ရတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ် …
November 23, 2019 Cele Love 0
ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့မို့ မလုပ်ပါနဲ့လို့ တားမရ၍ မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ရပ်ကွက်ရုံး တိုင်ကြားခဲ့ရတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ် … ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့မို့ မလုပ်ပါနဲ့ပြောတာကို တားမရ၍ မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ရပ်ကွက်ရုံး တိုင်ကြားခဲ့ရတဲ့ အဖြစ် “မရဘူး….ရှင့်ကို ရာအိမ်မှူး​နဲ့ကို တိုင်မှာ….” “မိန်းမကလည်းကွာ….ငါက ချစ်လို့စတာကို…. လာပါ….ပြန်ရအောင်….” “မပြန်ဘူး….မပြန်ဘူး….ရှင့်ကို တိုင်ကိုတိုင်မှာ…. […]